शिवालय माविमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १२० जनालाई पोशाक वितरण - नेपालबहस
| ५:४०:१७ मा प्रकाशित
९ फागुन, पोखरा । कास्कीको रुपा गाउँपालिका, वडा नं. २, थुम्कीस्थित शिवालय माविमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । सोही अवसरमा १२० जना विद्यार्थीका लागि विद्यालय पोशाकसमेत वितरण गरिएको छ ।
शिविरमा वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डा.गोपिलाल श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ डा. किरण शर्मा, निलम महर्जन, मीना थापा, सरु श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, शारदा पौडेल, सपना गुरुङ, ममता माली, भावना खाँडलगायतले परीक्षण तथा औषधि वितरण गरेका थिए । यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजन सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट तथा लायन्स क्लब अफ् अन्नपूर्णका अध्यक्ष डा। गोपिलाल श्रेष्ठले आफूहरु कुराभन्दा कामलाई महत्व दिने र शिवालय माविले पनि कामलाई महत्व दिएर अघि बढेकोमा खुसी लागेको बताए ।
लायन्स क्लब अफ् पोखरा नर्सेसकी अध्यक्ष मीना थापाले विद्यालयलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । उनले आगामी दिनमा पनि विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता सुनाइन् । विद्यालय र लायन्स क्लबबिच समन्वयको भूमिका खेलेका सञ्चारकर्मी सुशील नेपालीले शिवालयमा कार्यक्रम ल्याउन पाउँदा गौरव लागेको अनुभव सुनाए ।
उनले स्थानीयवासी, विद्यार्थी तथा विद्यालय परिवारको उत्साहजनक सहभागिताले आफ्नो प्रयास सार्थक रहेको भनाइ राखे । सो अवसरमा कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई विद्यालयका तर्फबाट सम्मान गरिएको थियो । शिक्षक जयराम सुवेदीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक रुपिन्द्र प्रभावीले स्वागत गरेका थिए ।
सेनाले सञ्चालन गरेको शिविरमा ५८२ जनाको स्वास्थ्य उपचार ७ दिन पहिले
गुल्म र नगरपालिकाको आयोजनामा स्वास्थ्य शिविर १ महिना पहिले
डब्लुएचओको पहिलो चरणको खोप भाेली काठमाडौं आइपुग्ने १४ घण्टा पहिले
ओलीले आज सुन्दरीजलमा आइपुग्ने पानीको अवलोकन गर्ने २१ घण्टा पहिले
प्रमोदको म भन्दा नि २ को अफिसियल भिडियो सार्वजनिक २३ घण्टा पहिले
न्याय नपाउँदा लामो समयदेखि द्वन्द्व प्रभावित परिवार निराश ७ दिन पहिले
निर्माणाधिन घरको छतबाट खसेर मजदुरको मृत्यु ३ दिन पहिले
म्याग्दीबाट बाह्र किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ १ हप्ता पहिले
५५ दिनमा फिल्म ‘आई एम ट्वान्टी वान’ को छायाँंकन सकियो ४ हप्ता पहिले
कुमारी बैंकद्धारा विपन्न विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण २ वर्ष पहिले
फरक अभिभावक बनाएर कीर्ते नागरिकता दिएको आरोपमा दुई पक्राउ ३ महिना पहिले
उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउकाे तयारी ३ महिना पहिले
सामुदायिक वनमा लागेको आगो १८ घण्टापछि नियन्त्रणमा २ हप्ता पहिले